Zviratidzo neminwe mitatu pane trackpad yeMacBook Pro nyowani haishande nemazvo | Ndinobva mac
Iwo matatu-minongedzo pane iyo trackpad yeMacBook Pros nyowani haishande nemazvo
Zvekare isu tinofanirwa kutaura nezve matambudziko ari kuva nemamwe maMacBook Pro mamodheru. Mazuva mashoma apfuura, vamwe vashandisi vakataura kuti yavo nyowani MacBook Pro neTouch Bar yakanga iine SIP yakaremara, chengetedzo inoganhurira mvumo yemidzi, ichidzivirira chero rudzi rwe malware kupinda muchirongwa uye kukanganisa Mac yedu. SIP inovhara yakatarwa sisitimu inosvika panowanikwa mafaira ekuisikidza. Asi panguva ino, isu hatisi kutaura nezve dambudziko rinogona kugadziriswa nekukurumidza nemirairo mishoma yakapfava kuburikidza neiyo tambo yekupedzisira, asi asi zvinoita kunge chinetso neiyo Hardware kana neiyo inoshanda system pachayo.
Dambudziko idzva riri kushandiswa nevashandisi rine chekuita neminwe mitatu-yeminwe yavanobata patripipad yeMacBook Pro nyowani neTouch Bar. Sezviri pachena iyi trackpad nyowani, yakakura kwazvo kupfuura mamodheru eMacBook Pro, haishande nguva dzese, asi inoitika pano neapo, dambudziko rakanyatso zadza mapikicha ekutsigira Apple nezvichemo nevamwe vazhinji. kuyedza kutsvaga mhinduro kuchinetso, mhinduro ingangouya nenzira yeiyo macOS yekuvandudza.
Dambudziko iri riri pakati nepakati uye rinoitika mune dzimwe nzvimbo dze trackpad kwete dzese. Kufungidzira kwekutanga nezvekwakabva dambudziko ndiyo nzira inoshandiswa neApple kuona uye kubvisa kuonekwa kubva muchanza ruoko, chanza icho nekuda kwehukuru hwe trackpad isu tinomanikidzwa kuisa pamusoro penzvimbo ino.
Pari zvino Apple haina kana kusimbisa kana kuramba iri dambudziko nyowani, iyo iri kuwanikwa mune mamwe maMacBook Pro mamodheru, chimwe chinhu chinozivikanwa mukambani. Parizvino hatizive kana huwandu hwevakakanganiswa hwakanyanya kwazvo, ingori vashoma vashandisi vari kubatwa zvakanaka asi vari kuita ruzha rukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Iwo matatu-minongedzo pane iyo trackpad yeMacBook Pros nyowani haishande nemazvo
Craig Federighi anotaura nezveramangwana re automation pane macOS
Iyo Apple Book, MacBook Pro Kubata Bar, MacBook Chakavanzika Port uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac